हाइब्रिड र जलवायु परिवर्तनको असर, मासिंदै रैथाने बाली – Nepal Japan
मोनसान्टो नामक हाइब्रिड बीउको मुसामा गरिएको परीक्षणमा जीएमओ बीउ खाने मुसाको आयु पाँच गुणा कम भएको नतिजा
नेपाल जापान ८ आश्विन १७:४७
उत्पादन बढी गर्ने नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विकसित बीउ (हाइब्रिड)को प्रयोग संसारभर भैरहेको छ । यसका सकारात्मक पाटो भनेको बढी उत्पादन हुनु होला तर दीर्घकालमाा यसले पार्ने असरका बारेमा कमै चासो दिइने गरिएको छ ।
नेपाल जस्तो भौगोलिक विविधता भएको देशमा कृषि उत्पादनका आफ्नै शैली, परम्परा र बीउ विजन थिए । हाम्रो आफ्नै जातका बालीहरुको प्रचूर संरक्षण भएको थियो । तर आजभोलि जलवायु परिवर्तनको असरसंगै हाइब्रिड बीउको प्रयोग र त्यो बीउसंगै उपयोग गरिने रासायनिक मल, औषधिले माटोको उर्बराशक्ति कमजोर हुँदै रैथाने बाली नास भैरहेको छ ।
हाइब्रिड बीउको एकपटक प्रयोग गरेपछि अर्कोपटक स्थानीय बीउ त्यो माटोमा उम्रदैन र उम्रे पनि फल दिंदैन । अनि सोही बीउ र त्यो बीउसगै प्रयोग गर्नुपर्ने रासायनिक मल र औषधिका कारण मानव स्वास्थ्य समेत कमजोर बन्दै गएको छ । यसमा जलवायु परिवर्तनले अर्को सहायक भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
हाइब्रिड बीउ, मल, औषधि नेपाल भित्र्याउन ठूला र घरानीय कम्पनीहरु नै सक्रिय छन् । सरकारले रैथाने बीउ संरक्षणको नीति नै लिन सकेको छैन । वास्तवमा आयात गरिएको बीउ नेपाली माटो अनुसारको हो कि हैन र भन्ने परीक्षण समेत हुँदैन । अर्को गम्भीर सवाल के हो भने जुन बीउ प्रयोग हुन्छ सोही कम्पनीले बनाएको औषधि अन्य रासायनिक पदार्थ खेतबारीमा हाल्नुपर्छ । जसले गर्दा माटोमा रासायनिक पदार्थको लत लाग्छ र रैथाने बाली मासिन्छ ।
नेपाल जस्ता मुलुकमा यो कम्पनीको बीउ सुटुक्क भित्रिएको र यसले कृषि उत्पादनमा व्यापक नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । हाइब्रिडले मानवीय र वातावरणीय स्वास्थ्यमा पनि निकै प्रतिकुल असर पार्ने भन्दै विश्वभर नै प्रदर्शन हुने गरेका छन् । स्मरणीय के छ भने यस्ता बीउको प्रयोगपछि माटोको उर्बराशक्ति नष्ट हुनुका साथै रैथाने बीउ विस्थापित हुनेछ । उसै त नेपालका रैथाने बीउहरु हराउँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त भैरहेका बेला निश्चित कम्पनीका हाइब्रिड बीउ प्रयोग गरेपछि उत्पादनका लागि वाध्य भएर महंगो मूल्य पर्ने यही कम्पनीको औषधि र मल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यो बीउ मात्र रोप्दा बाली लाग्दैन ।
हाइब्रीडको नाममा भित्रिने यस्तो बीउले स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । मोनसान्टो नामक हाइब्रिड बीउको मुसामा गरिएको परीक्षणमा जीएमओ बीउ खाने मुसाको आयु पाँच गुणा कम भएको नतिजा आएको र यस्तो बीउबाट उत्पादित खाद्यन्न सेवन गर्दा मान्छेको स्वास्थ्यमा ६५ प्रकारका नकारात्मक असर पर्ने दावी गरिन्छ । नेपाल जस्तो ८० प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर रहेको मुलुकमा यस्तो बीउ भित्र्याउन पाए यहाँको अर्थतन्त्र नै सो कम्पनीको पकडमा जाने खतरा छ ।
भारतमा हाइब्रिड भित्रिएको एक दशक नाघेको छ । यसैका कारण कृषि उत्पादनमा कमी आएर जीवन निर्वाह गर्न नसकेपछि भारतमा वर्षमा दशौं हजार किसानले आत्महत्या गर्ने गर्दछन । भारतमा एक वर्षमा १५ हजारभन्दा बढी किसानले आत्महत्या गर्ने गरेको तथ्यांक भारतको राष्ट्रिय अपराध ब्युरोकै छ । यसको एउटै कारण भनेको लगाएको बालीबाट उत्पादन नहुनु हो । यसको प्रमुख कारणमा बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीका हाइब्रिडको बीउ हो । किनभने यस्ता बीउबाट उत्पादन धेरै हुनेमा शंका छैन तर राम्रो स्याहार नपाएमा वा तापक्रम, हावापानी सामान्य असर परेमा फलै नलाग्ने हुन्छ । यो जटिल समस्याको समाधान रैथाने बीउको रक्षाका साथै माटोको उर्बरा शक्तिको बचावट नै हो ।
नेपालकै उदाहरण लिने हो भने हजारौं वर्षदेखि प्रयोगमा आएका बहुचर्चित ‘ब्राण्ड’हरु हराउन थालेका छन् । ‘पोखरेली मसिनो’ धान अहिले लगभग हराइसकेको छ । ‘बास्मती’ धानको ठाउँ पनि हाइब्रीडले नै लिइसकेको छ । आजकल पोखरेली र बास्मतीको नाममा अरु नै धान उत्पादन हुन्छन् । बूढापाकाहरु आजकलको चामल देखेरै दिक्क मान्छन् । त्यस्तै तरकारीको रैथाने बीउ नष्ट हुँदै गएको छ । माटोको उर्बरा शक्तिका भरमा उत्पादन हुने तरकारीहरु आजकल इन्जेक्सनका भरमा परिपक्व हुनुपर्ने अवस्था छ । यसको एउटै कारण भनेको हाइब्रीड बीउ र त्यसबाट अत्यधिक उत्पादन लिन प्रयोग गरिने रासायनिक पदार्थ नै हो । यसले गर्दा माटोको उर्बरा शक्ति कमजोर हुँदै रैथने बीउलाई सेचन गर्नसक्ने शक्ति गुमाउँदै गएको छ ।
निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली रहेको मुलुकको आर्थिक विकासका लागि कृषि उत्पादनमा जोड दिनुको विकल्प तर यसको नाममा जे मनलाग्यो त्यही गरेर माटोको उर्वराशक्ति ह्रास गराउने, कमशनखोरहरुलाई पोस्ने नीति बन्द हुनुपर्छ । परम्परागत कृषिबाटै मनग्गे उत्पादन गरेर नेपालले धानचामल निर्यात गथ्र्यो ।
चार दशकअघि नेपाल चामल निर्यात गर्ने प्रमुख मुलुक थियो । नेपाली चामल खानेहरु आज विश्व अर्थतन्त्रका शक्ति राष्ट्र बन्दैछन् र बनिसके । हामी भने अहिले अनुदानको चामलको भात खाएर बाँच्नु परिरहेको छ । यो तथ्यले हाम्रा शासक, नीति निर्माता, योजनाविद् र कार्यान्वयनकर्तालाई पटक्कै लज्जबोध छैन ।
नेपालको चारदशक अघिको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा अहिलेको समृद्ध मुलुक दक्षिण कोरियाकोभन्दा बलियो थियो भन्छन् विज्ञहरु । कुनै समय नेपालले कोरियालाई अनुदान दिन्थ्यो भन्ने सुन्दा यो पुस्ताका नौजवानहरु जिभ्रो टोक्न बाध्य हुन्छन् । त्यस्तै आजको स्थितिलाई मूल्यांकन गरेर नेपालले कुनै बेला चामल निर्यात गथ्र्यो र त्यो निर्यातको सबैभन्दा ठूलो हिस्सामा रहन्थ्यो भन्दा पत्याउन धेरैलाई थाह्रो पर्छ ।
परम्परागत कृषिलाई आधुनिकरण गर्ने नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका स्वार्थ हावी हुँदा चार दशकको बीचमा मुलुक खाद्यान्न निर्यात गर्नेबाट आयात गर्नेमा झर्यो । कृषिमा मात्रै आत्मनिर्भर हुनसके नेपालको व्यापार घाटाको २० प्रतिशत हिस्सा कम हुन्छ । तर, योजनाविद्, नीति निर्माता र कार्यान्वयन कर्ताहरुको बाहिरी शक्तिको स्वार्थमा चल्ने कुबुद्धिका कारण नेपालको अर्थतन्त्र नै धराशायी बनेको छ ।
आज दुनियाँ अग्र्यानिक कृषिमा उन्मुख भैरहँदा हामी आधुनिक कृषिको नाममा विषादी भित्र्याइरहेका छौं । कृषिकर्म गर्ने बलिया पाखुरी निर्यात गरेर तिनीहरुकै पसिनाले बस्तु आयात गरेर खाइरहेका छौं । यस्तो अवस्थाको अन्त्य नहुँदासम्म यहाँ श्रमगर्ने हातहरु नै हुँदैनन् । दैनिक १५ सय युवाहरु अरब कुदेका छन् । उनीहरु समृद्ध नेपाल बनाउने सपना बोकेर पुगेका हुन् कि परिवारको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न ? यो अहम् प्रश्नको उत्तर शासक वर्गले खोज्दैपर्छ ।
के.पी. ओली : एक रहस्यमय व्यक्तित्व
“शून्यमा शून्य सरी हराएका”हरुको कथा–व्यथा
कर्णालीको फेरिएको परिचय : अब शहरमा बिरामी होइन, चिकित्सक पठाउँछ
२२ मंसिर १३:०२
१५ हजार वर्षअघिदेखि चलिरहेको विवाह पञ्चमी
२२ मंसिर १२:४२
माधव नेपाललाई एमालेको किन यत्रो चिन्ता ?
२२ मंसिर १२:१३
२२ मंसिर ११:५६
को हुने सभापतिमा देउवाका प्रतिस्पर्धी ?
२२ मंसिर ११:४४
७. सभामुख सापकोटा नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल स्वदेश फिर्ता